सर्वश्रेष्ठ DIY हस्तनिर्मित क्रिसमस पोस्टकार्ड विचारहरू क्रिएटिव अनलाइन
प्रत्येक क्रिसमस हामी प्राप्त गर्दछौं क्रिसमसलाई बधाई दिन पोस्टकार्डहरू। यो सत्य हो कि यो परम्परा हराएको वा विकसित हुँदैछ नयाँ को आगमन संग प्रविधिहरू.
हामी तपाईंलाई धेरै विचारहरूको साथ प्रेरणा दिन चाहन्छौं ताकि तपाईंलाई आफ्नो बधाई सिर्जना गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ क्रिसमस को। अलिकति कल्पना, समय र भ्रम तपाईं परिवार वा साथीहरूको सबै भन्दा मौलिक हुन सक्नुहुन्छ।
1 हस्तनिर्मित पोष्टकार्डहरू
2 आफ्नै शरीर प्रयोग गर्नुहोस्
3 बटन सहितको पोस्टकार्ड
4 कार्डबोर्डको साथ पोस्टकार्डहरू
5 कार्डस्टकका साथ अधिक विचारहरू
6 कढ़ाई पोष्टकार्डहरू
7 के तपाईंलाई वाशी टेप थाहा छ?
काममा जानुहोस् र तपाईंको सिर्जनात्मकता उडान दिनुहोस् हस्तनिर्मित क्रिसमस कार्डहरू बनाउँदै। घरका साना बच्चाहरूसँग गर्नु राम्रो गतिविधि हो। राम्रो आइतबार योजना! तपाईंलाई केवल थोरै प्रेरणा र सामग्री चाहिन्छ जुन तपाईं घरबाट पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तिनीहरू DIY भनिने प्रख्यात शिल्पहरू हुन् (आफै गर्नुहोस्), अनुवाद हो "यसलाई आफैं गर्नुहोस्"।
आफ्नै शरीर प्रयोग गर्नुहोस्
पहिलो उदाहरण जुन हामी तपाईंलाई देखाउन चाहान्छौ एकदम सरल छ, तपाईंलाई केवल पेन्ट, मार्कर वा केहि सामग्रीहरू चाहिन्छ कि रyes र आफ्नो शरीर। तपाईं त्यो सही पढ्नुहुन्छ, तपाईंको आफ्नै शरीर। हामी जाँदै छौं क्रिष्टमस प्रतिमाहरू आफ्नै प्रिन्टहरू, हातहरू वा खुट्टाहरू बनाउनुहोस्.
केही हेरौं उदाहरणहरू:
हामी छविमा देख्न सक्छौं, यी रेनो तिनीहरू हुन् औंठाछापको साथ बनाईएको मैले केहि रंगें। पछि, जब यो सुख्खा हुन्छ, हामी आँखा, कान र सीsहरू बनाउँदछौं। हामी हाम्रो चित्रकलालाई बधाई पाठको साथ र ... तयार!
con विभिन्न र of्ग को रंग र हाम्रो फुटप्रिन्टहरू हामी क्रिसमस बल्बहरू के हुन्छौं बनाउँदछौं। सुख्खा हुँदा हामी केबलको प्रभाव दिन अनियमित रेखाको साथ उनीहरूमा सामेल हुनेछौं।
अर्को विकल्प सम्पूर्ण प्रयोग गर्नु हो हातको पाम र हाम्रो रचनात्मकता उडान दिनुहोस्। उदाहरण को हिममाना कोरिएको को रूप मा, हामी बुद्धिमान मानिस, सान्ता क्लाउज वा चरनी अन्य चरित्र बनाउन सक्छौं।
बटन सहितको पोस्टकार्ड
एउटा विकल्प हो रिसायकल सामग्री र वस्तुहरू जुन हामीसँग घरमा रहेका छन् हाम्रो पोष्टकार्डहरू बनाउन। यस अवस्थामा, हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाइँ सिलाई बक्स बाहिर लिनुहोस् र ती सबै प्रयोग गर्नुहोस् botones साझेदार बिना जुन हामी कुनै अर्थ बिना राख्छौं।
बटनहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ? हाम्रो डिजाइनमा तिनीहरूलाई समाहित गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। हामी तपाईंलाई केहि देखाउँदछौं उदाहरणहरू, ती निश्चित रूपले तपाईंलाई प्रेरणा दिन्छन् तपाईंको आफ्नै सिर्जना गर्न।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूले प्रदर्शन गर्न सक्छन् धेरै फरक तरीकाले एक समान चरित्र, र ती सबैको आकर्षण छ। तपाईंको कल्पना उडान दिनुहोस् र सामग्री तपाईं स्मार्ट तरिकामा प्रयोग गर्नुहोस्। यी हिममानव सँग बनेको botones प्रदर्शन गर्न धेरै सरल छन् र परिणाम साँच्चिकै हो मूल.
हामी यो पनि प्रयोग गर्न सक्छौं अक्षरहरू जस्तै बटनहरू। यस अवस्थामा, "हो हो हो" लेखिएको छ, ओन्टोमेटोपिया जुन सान्ता क्लाउजले हाँस्दा। अक्षर "o" बटनले बदलिएको छ। यो एक धेरै साधारण विचार हो तर परिणाम धेरै राम्रो छ।
क्रिसमसको सजावट, बलहरू जुन हामी रूखमा पर्खन्छौं विभिन्न रंगका बटनहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ। छिटो, सजिलो र रंगीन!
कार्डबोर्डको साथ पोस्टकार्डहरू
को रंगीन कार्डस्टक अझ बढि सिर्जना गर्न हाम्रो उत्तम सहयोगी हुन सक्छ व्यावसायिक हाम्रो क्रिष्टमस पोस्टकार्डहरू। हामीलाई धेरै समय बचत गर्नुहोस् रंग ध्यान दिनुहोस् कि त्यहाँ ट्रेन रोक्नका लागि विचारहरू छन्।
con तीन कार्ड विभिन्न र colors्ग, एक शरीरको प्रत्येक अ for्गको लागि तपाईं वास्तविक चमत्कार पाउन सक्नुहुन्छ। यो मनमोहक सान्टा क्लाउज यसका साथ बनेको छ:
रातो कार्डबोर्ड: टोपीको लागि।
गत्ता मासुको रंग: अनुहारको लागि।
सेतो कार्डबोर्ड: टोपी र दाह्रीको तल्लो भागको लागि।
तपाईंले भर्खरै गर्नु पर्छ हरेक टुक्रा टुक्रा पार्नुहोस् आकारमा तपाईलाई उपयुक्त लाग्दछ, तर चाल भनेको त्यो हो किनाराहरू ragged छन्। यसलाई टाँस्नुहोस् र पछि ड्र नाक र आँखा। धेरै सजीलो!
हामी इमेजमा देख्छौं, हामीaप्राप्त गर्न सक्छौं हिममानव एक धेरै साधारण तरिकामा चराको आँखा दृश्यमा। यदि हामी यो पोस्टकार्ड कसरी बनाइएको विश्लेषण गर्दछौं भने हामी बुझ्दछौं कि राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न यो सजिलो छ। पर्छ विभिन्न आकारका तीन क्षेत्रहरू काट्नुहोस्। हामी सेतो कार्डस्टक प्रयोग गर्नेछौं। यी क्षेत्रहरू हिउँदको शरीर हुनेछ। हामी चित्र कोर्दै काट्छौं नाक, the हतियार र स्फूर्ति। बाँकी हामी ट्रेस गर्नेछौं कालो मार्करको साथ: आँखा र मुख।
यदि हामी एक को लागी प्रशोधनको उच्च स्तर, हामी तपाईंलाई पोस्टकार्डको श्रृंखला देखाउँदछौं जसमा अधिक समय र ट्रेस आवश्यक पर्दछ। तपाईका धेरै पोष्टकार्ड बनाउने विचार गर्न सक्नुहुन्छ diferent मोडेलहरू। यस तरिकाले, तपाइँका साथीहरू, उदाहरणका लागि, ती सबै एक फरक मोडेल भएको देख्नुहुनेछ। यो एक तरीका हो यो देखाउन कि यो केहि धेरै छ बढी व्यक्तिगत र तिनीहरूले अधिक संग यो बुझ्न हुनेछ भ्रम.
यी पोष्टकार्डले प्रतिनिधित्व गर्दछ फरक अक्षर हामीलाई मा फिट क्रिसमस मितिहरु:
सांता क्लॉज, एक अमेरिकी चरित्र जो बस्नको लागि हाम्रो देशमा आएको छ। हामीले धेरै वर्षदेखि यो परम्परा अपनाएका छौं।
रेनो, सन्तको स्लिह तान्ने जनावर हो।
Penguin, जुन जाडोको चिसो दर्शाउँछ।
हिममानव। यसले चिसो र हिउँलाई पनि जनाउँछ।
कार्डस्टकका साथ अधिक विचारहरू
त्यहाँ विचारहरूको एक विस्तृत श्रृंखला छ, हामी तिनीहरूलाई केहि प्रस्ताव गर्दछौं:
को तीन बुद्धिमान मानिसहरु.
बेथलेहेममा जन्म दृश्य.
क्यामेलोस, जनावरहरू कि यस मामला मा शूटिंग स्टार अनुसरण जो तीन बुद्धिमान मानिस संग।
क्रिसमस रूख। हामी यसलाई धेरै तत्वहरू जस्तै बल, बत्ती र ताराले सजावट गर्न सक्छौं।
नडाल काका वा cagatió, यो क्याटलनको परम्परा हो।
अन्य धेरै विकल्पहरू मध्ये।
एक धेरै मूल प्रस्ताव छ हाम्रो पोष्टकार्डहरू कढ़ाई गर्न। सबै भन्दा पहिले, हामी पर्छ डट कार्डबोर्ड थोप्लाहरूको साथ हामी आकार हामी कोर्न चाहन्छौं। हामी कार्डबोर्डमा यो कढ़ाई गर्नेछौं, त्यसकारण हामी समर्थन बिच्छेद गर्न धेरै सावधान हुनुपर्दछ।
पहिलो चरण लिनु भनेको हाम्रो डिजाइनको हो। हामी यसलाई हातले गर्न सक्दछौं वा यसलाई अनलाइन हेर्नुहोस् र प्रिन्ट गर्नुहोस्। हामी सुझाव दिन्छौं कि यो साधारण रेखाचित्रसंग केही लाइनहरु र ती हुन् तिनीहरू बीच अलग। कारण एकदम सरल छ, किनकि यदि प्वालहरू एक अर्काको नजिक छन् भने उनीहरूले ड्रिलिंग गर्दा च्यात्छन्।
छवि टाँस्नुहोस् मा टेप संग अगाडि भाग कार्डको, जहाँ तपाईं रेखाचित्र राख्न चाहनुहुन्छ। होलले डिजाइनको आकार चिन्ह लगाउँदै। पछि, पाना हटाउनुहोस् र तपाईं embroidering सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। A truco कार्डबोर्डलाई क्षति नगरी प्वालहरू बनाउनको लागि एक हुनुपर्दछ नरम समर्थन तल। तपाईं यी सुविधाहरूको साथ कर्क, पोलिस्टीरिन, इरेज़र वा कुनै पनि सामग्री प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। बीचमा न्यूनतम दूरी राख्नुहोस् प्वालमा and र mill मिलिमिटर फुटेको रोकथाम गर्न।
के तपाईंलाई वाशी टेप थाहा छ?
हामी धेरै प्रकारका सामग्रीहरू प्रयोग गर्न सक्छौं, र केही वर्ष अघि washi टेप। तिनीहरू बारेमा छन् सजावटी र रंगीन आकृतिहरूको साथ चिपकने टेपहरू.
हामी कार्डबोर्ड, मार्कर र वाशी टेपको साथ धेरै शान्त पोष्टकार्डहरू बनाउन सक्षम हुनेछौं। हामी तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न सक्दछौं धेरै कम मूल्यविशेष गरी यदि हामी किन्छौं प्याक इन्टरनेट द्वारा। हामी तपाईंलाई एउटा लिंक छोडदछौं यहाँ यदि तपाईं यो सामग्री किन्न हिम्मत गर्नुहुन्छ।
हामी एउटाबाट सुरु गर्छौं क्रिसमस रूख। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा यो गर्न सजिलो छ, हामीलाई धेरै र onlyहरू चाहिन्छ। हामी स्ट्रिपहरू ठूलादेखि छोटो लम्बाइसम्म काट्छौं र हामी त्यसलाई ग्लू राख्छौं।
हामी माथिको छविमा देख्छौं, हामी वाशी टेपको साथ फ्रेमहरू बनाउन सक्छौं र हामी केन्द्रमा जे चाहन्छौं लेख्न सक्छौं। हामी विचारहरूको खोजी गर्न सक्छौं अक्षर राम्रो अक्षरहरू बनाउने विचारहरू प्राप्त गर्न। विकल्प अनन्त छन्!
अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईंको पोस्टकार्डहरू बनाउँनुहोस् र सबै भन्दा माथि ...क्रिसमस क्रिसमस!
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » DIY क्रिसमस पोस्टकार्ड विचारहरू